मेरा असली कमरेड
एक छिन हासौंन
कबिता - म र मेरो !!!
कुरो राजनितीको,बिषय समाजीक परिस्थीतीको। बुझी नबुझी प्रजातन्त्र भनेर लागियो। त्यही भूमरीमा कम्युनिष्ट प्रजातन्त्रको अर्को ध्रुबमा छ भनेर चिनाइए। तर खोइ पुरानो कम्युनिष्टको त के कुरो जंगलको खाटी कम्नियुष्ट पनि बहुदल तिर तेर्सियो। अब क्यारेमबोर्डका गोटीको निसाना दुइ ध्रुब रहेनन, सहस्र गोटी छरपस्ट जुन प्वाल नजीक उतै तेसारीने भए।
केही पहिले एउटा कमरेडको कथा पढेको थिए। सारै घतपरेको थियो। लेखकका साथीका जस्तै मेरा साथीका बुवा पनि नेपालकै नं १ बामपन्थी लेखक हुन। भनौं न कुनै पार्टी तिर नलागेका असली कमरेड । देशै हल्लाएर लेख्ने। तिनैको गाला तासिएको अनुहार सम्झेर कथा सकाएको थिए। केही समय पछि अर्का परिचित मित्रलाइ कमरेडको बखान दिन मन लाग्यो। हुन पनि नेपालमा यस्तै यस्तै कमरेड छन बजारभरी। मरिगए भेटीएन त्यो कथा। कथा यसरी भिजेको थियो मनमा, आफै पुन लेखौं कि जस्तो लागेको थियो। लेख्ने लेखक साझाको चौतारीमा आउने गालब हुन कि जस्तो लागेको थियो, तर सोध्दा हैन रहेछन। कस्तो रसिलो लेख जहिले सम्झदा पनि मानसपटलमा ताजै रहने। न त मैले पुनर लेखन नै गर्न सकें नत गुगलमाताले नै साथ दिइन। ति लेख र त्यो कथा धमिलो बनि हरायो आकाशमा। आज “दौतरी Followers” क्लिक गरेको त, "लौ कथाको रसवरी त त्यही पो रहेछ"। अब मेरो खस्रा शब्दको गाठो पारेर त्यही रसिलो रसबरीको पोको खोल्दै छु। उनै पुरान मित्र गोतामेको बाम नेता...
"पुराना वाम नेताको एक दिन"
'पुराना वाम नेता' बिहान साढे आठ बजे उठ्छन् र चूरोट च्यापेर शौचालयतिरको यात्रामा निस्कन्छन्। एकछिनपछि प्रतिकृयावादीहरुलाई बगाएर (फ्लश गरेर) आऊँछन्, दाँत मल्छन्, मुख धुन्छन् र अचानक चाल पाऊँछन् धङ्धङे छ र टाउको दुखिरहेछ । बगैँचाको कुर्सीमा बसेर कालो कफीको चुस्की लिँदै अखवारहरु पढ्छन। सबैको पहिलो पाना ध्यान दिएर हेर्छन्, केहि नपाएर रिसाएजस्तो देखिन्छन् र मुर्मुरिन्छन् । अनि फेरि भित्री पानाहरु हेर्न थाल्छन्। एउटा पत्रिकाको एउटा कुनामा देख्छन् "--------'पुराना वाम नेता' श्री रुसभक्त-चीनमित्र दिल्लीमा उपचार गराई फर्कनुभएको छ।----" भन्ने चार लाइनको समाचार छ। फर्केको एक हप्ता भइसक्यो, बल्ल पत्रिकाले लेख्यो, फेरि त्यो पनि भित्री पानामा यति थोरै छुस्स! कालो निलो हुन्छन् 'पुराना वाम नेता', आफूलाई आजभोलिका "गुलेली बोकेर चरा मार्न हिँड्ने जस्ता" (उहाँलेनै आविष्कार गर्नु भएको विशेषण) पत्रकारले भुत्ला समान पनि नगनेको देखेर ।
पुराना वाम नेता पत्रिकाहरु एकातिर हुर्र्याऊँछन् र एकछिन त्यत्तिकै टोलाऊँछन्। 'श्रीमती पुराना वाम नेता' मन्दिरबाट आईपुग्छिन्, श्रीमानलाई टिका लगाईदिन्छिन्,टाउकोमा फूल राखिदिन्छन्।
एघारबजे 'पुराना वाम नेता' "भूजा" ज्यूनार गर्छन्; कान्छाले किनेर ल्याएको, बाहुनी बज्यैले पकाएको र बुहारीले पस्केको भूजा। उनी अघाऊँछन्, डकार्छन्, चूठ्छन् र सुत्न जान्छन्। 'श्रीमती पुराना वाम नेता' उनको पुरासंग खान थाल्छिन्। सुत्नै आँटेका थिए 'पुराना वाम नेता', फोन आऊँछ एक जना साथीको। उनकी कान्छी छोरी माग्दैछ साथीले आफ्नो भाञ्जाको लागि। "छोरी नआइ के कुरा गर्नु र खै! आजभोलिका पढेलेखेका छोरीहरु-----" आदि अण्टसण्ट बोलेर अल्मल्याऊँछन् साथीलाई र फोन राखिदिन्छन्।
जबकि केहि दिन अघिमात्रै छोरीले चीनबाट फोन गरेकी थिई उतै संगै पढ्ने एउटा नेपाली केटासंग बिहे गरें र दुबै जागिर खाँदैछौँ कुनै बिदेशी कम्पनीमा भनेर। जर्मनीमा पढ्दै गरेकी जेठी छोरी कुइरेसंग बिहे गरेर अमेरिका पसेकी उताको उतै छे। तै यल्ले त नेपालीसंगै गरिछे, ठिकै भो। बरु बेलाबेलामा आफ्नी बूढीलाई सम्झाउन भने उनलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। जोरिपारीको अगाडि टन्न दाइजो दिएर छोरीहरुको बिहे गर्दिन नपाएको पीरले सुकेकी छिन् "श्रीमती पुराना वाम नेता" ।
कल्चर सीटमा पढाए उनले छोरीहरुलाई र कान्छो छोरोलाई भने आफ्नै खर्च भरेर अमेरिका पढ्न पठाएका हुन तर छोराले पढ्छ कि काम गर्छ उनलाई थाहा छैन। जेठो छोरो एउटा ठूलै एनजीओ चलाऊँछ र पजेरो चढेर हिँड्छ। बच्चैदेखिको एक नम्बरको स्वाँठले यति गर्नसक्यो, दंग छन् उनि।
नेपालमा क्रान्ति भएको र आफूलाई गद्दार भनेर चौबाटोमा झुण्डाएको सपना देखेपछि आत्तिएर ब्युँझन्छन् "पुराना वाम नेता" । जीऊ पसिना-पसिना भएको रहेछ। आधा घण्टा लगाएर नुहाऊँछन् गीतविनाको धून सुसेल्दै र सपना बिर्सन्छन्।
साढे तीन बज्छ। पेण्ट, शर्ट, स्पोर्टस् जुत्ता र कालो चश्माले सजिएर उनी निस्कन्छन्। घुम्दै-घुम्दै नया सडक पुग्छन्,एक ठाऊँमा पान खान्छन् र विस्तारै रत्नपार्कतिर लाग्छन् 'पुराना वाम नेता'। सोह्रहाते गणेशको मन्दिरनेर एउटा अर्को पुरानो वाम नेता भेट हुन्छ, पहिले उनको विरोधी खेमाको, अहिले उनकै खेमाको (याने 'पुराना' खेमाको!) दुई जनाको गफ शुरु हुन्छ । दलको स्थापनादेखि आजसम्मको र मार्क्सदेखि किम जोङ इल सम्मको। कहिले चश्मा मिलाऊँदै र कहिले एक हात पेण्टको खल्तीमा राखेर, दाहिने हातको चोर औँलो ठड्याई, उभिई उभिइ पालै पालो ठूलो ठूलो स्वरमा गफ गरेको देखेर टाढाबाट देख्ने कसैले ठान्दो हो, घोर घमासान वाक्युध्द भइरहेछ।
एकछिन पछि दुबै थाक्छन् र भोटाहिटीभित्रको एउटा नेवारी रेष्टूरां पुग्छन्। 'पुराना वाम नेता' र 'साथी पुराना वाम नेता' आजभोलि बियर मात्र पिऊँछन्। बियर र छोइला-सेकुवा आदिका साथ गाली रामायण शुरु हुन्छ।
"फलानो, फलानो, फलानो जाँठाहरु सब दरबारका हुन्!" जबकि दुबैलाई भित्री मनमा विश्वाश छ, आऊँदो राष्ट्रिय सभामा आफू दरबारबाटै छानिने। "फलानोले फलानो किताब चोरेर लेखेको हो, त्यल्ले लेख्नै जान्दैन।" जबकि किताब प्रकाशन गर्न त उनीहरुलाई पनि मन छ (काश लेख्न सकेको भए!) यसैगरी रातको एघार बज्छ, 'पुराना वाम नेता'को छोरो आइपुग्छ गाडी लिएर। 'साथी पुराना वाम नेता'लाई डिल्लीबजार छोडेर गाडी टंगालतिर लाग्छ।
घर पुगेर सुत्दा 'पुराना वाम नेता'को मन खुशीले फूलिरहेको हुन्छ। आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्छन् उनी। धन-सम्पत्ति जोडिएछ र छोराछोरीलाई मान्छे बनाइएछ; जीवन खेर गएनछ। आफू युवा हुँदा गरेको प्रण, विद्यार्थी जीवनको जोश र आकांक्षा आदि पनि उनको दिमागमा अष्पष्ट रुपले आउन थाल्छन्। तर त्यतिखेरसम्म 'पुराना वाम नेता' निदाइसक्छन्।
(सक्कली कथा http://gautambasanta.blogspot.com/ मा छ)
Posted by: nepalean Labels: हाँसो-ठट्टा/ व्यङ्ग्य
कुरो ठिकै हो, बदमाशले सजाय नपाए के पुरस्कार पाउने त? । कति आनन्द आउछ हैन त बदमाशलाइ हतकडी लगाएर न्यायको कठघरामा उभिएको हेर्न? अमेरीकाको इलोनोइ(Illinois ) गणराज्यका गभर्नर Rod Blagojevich अब ३० बर्ष जती जेलमा बास बस्ने पक्का छ। उनले राज्यको सहयोगबाट चल्ने पत्रिकालाइ धम्काएर आफ्नो बिरोधमा लेख्ने पत्रकारलाइ ननिकाले रकम नै निकासा नदिने धम्की भरिएको टेप संघिय पुलिसले अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्‍यो। आफ्नी श्रीमतीलाइ उच्च तहको जागिर दिलाउन खोजेको देखी राष्ट्रपतीका लागी हालै मात्र बिजय भएका बराक ओबामाको सिनेट पद ब्यक्तीगत फाइदाको लागी लिलाम बढाबढ गरेको उनी माथी थप आरोप छन। बिकसित देशमा घुस्यालाइ यसरी घोक्रेठ्याक लगाएर जेल कोचेका प्रस्तश्त उधारण छन।
तर यस्तो आनन्द लाग्ने समाचार आज सम्म नेपालमा देखेको छैन। साधरण चोर्ने,फोड्ने,पाकेट मार्ने आदीलाइ दोषि ठराएर जेल चलान भए होलान तर देशको सरकारी पदमा बसेर शक्तीको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पती कुम्लाउनेलाइ औलो ठडाउने बाहेक केही कारबाही भएको छैन। के यस्ता घुस्याहालाइ कारबाही गर्ने देश नै धनी हुनुपर्दछ त? कि नेपालमा घुस्याहा नै छैनन्? किन नहुनु नि, नेपालमा त जती पद ठुलो भयो उती निसफिक्री घुस खान पाइन्छ। यस्तो हालत देख्दा त नेपाल तेस्रो होइन चौथौ मुलुक जस्तो लाग्दछ जहां अनिमियता देखी कानुनी संचरना बेखबर छ। अथवा पत्रिकामा खबर छापिएको भरमा वाध्य भएर केही गरे जस्तो गर्दछ जुन खबर जस्तै भोलीपल्ट अस्ताउन हुनपुग्दछ।
साच्चै भन्नु पर्दा घुस्याहालाइ कारबाही गर्न पैसा होइन एउटा लठ्ठी काफी छ। सकिन्छ भने घुस्याहालाइ जेलमै कौचौं होइन भने लठ्ठले सोरेर भए पनि कारबाही त गरौं। यांहा त घुस्या हतकडी लगाएर जेलदरबार होइन सलामी खाएर सिहंदरबार पुग्दछन। अहिले हेरौं न जेपी गुप्तालाइ? जेलमा थलापरी रामायण पढ्ने बेलामा नया नेपाल बनाउन संबिधान लेख्दैछन। के लेख्लान यस्ताले संबिधान? दुधको सांची बिरालो। यस्ता डाकाले लेखेको संबिधानले के नया नेपाल बन्ला? संबिधान सभाको बठैक दिन दिनै बस्दैछ। सभासदहरु जसरी भए पनि दैनीक पेश्की असुलीरहेका छन। संबिधान त बन्ला। संबिधानको किताबले देश त पक्कै चलाउदैन। आखिर देशमा नियम कै खिल्ली उठाए जस्तै स्वर्गको जस्तै संबिधान बनाए पनि जनतालाइ के फरक पर्दछ र? जब सम्म बदमासहरु खुलेआम घुमफिर गर्दछन देशले कहिले सहि बाटो समात्दैन। हामीलाइ बिकास होइन दु:ख गरेर कमाएको निबेकले निर्धक्कसंग हातमुख जोर्न पाए पुग्दछ।
हाँस्नै त हो हाँस्नलाई कुनै बिषयबस्तु त चाहिदैन वा रोजिरहनु पर्दैन। जुन जुन कुराले घत् पुर्याएर हँसाउछ त्यही कुराहरु म यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु । अर्थात जुन कुराहरुले मलाई हाँस्न वाध्य तुल्याएको थियो वा अहिले पनि हाँसी रहेकी छु। खास म हाँस्यब्यङ्यकार पनि त होइन।मैले यो बिधामा कलम चलाएकी पनि छैन।यो त केवल मलाई घत् पुगेर हाँस उठेको कुरा मात्र यहाँहरुलाई बाँड्न खोजिरहेकी छु ।
अब मेरो आफ्नै वास्ताविक्ता सुन्नु होस् न !जब म नेपालमा थिए एउटी गिनिचुनेको गीतकार अर्थात लेखिका थिए भनु । बरिष्ठ् नभए पनि महिला ''राइटर'' भनौ अङ्रेजिको 'डब्ल्यु' अक्षरबाट शुरु हुने शब्द ''राइटर''। आहा कत्ती अभिमान थियो त्यो वाक्यमा। कस्तो स्वाभिमान थियो? साहित्यिक जमघट,कार्यक्रमहरुमा कस्तो सम्मान थियो। भनौ गोजी रित्तो भए पनि 'राइटर' हुनुको अभिमान थियो । घरमा चुल्हो बल्न धौ-धौ परेपनी ''राइटर'' हुनुको इज्जत थियो। अर्थात संसारभरी नै ''राइटर''को स्थान अलग्ग हुन्छ। त्यही मध्ये म पनि आफ्नो देशको लागि एक लेखिका अर्थात ''राइटर''नै थिए भन्नु पर्ला। होइन भनु भने पनि रेडियो, एफ एम हरु लगायत पत्रपत्रीका सबैमा लेख्न नभियाएको होइन। नेपाली सैनिक कार्यक्रमको त स्थाइ नाटक,गीति कथाकार नै भएर काम गरेकी हुँ । मेरा प्रशङ्सकहरुका पत्रहरुमात्र दिनको २५/ २६ वटा पढ्न पाउदथे। कसरी लेख्ने मान्छे होइन भनेर पनि भनु म आफुलाई? अर्थात जे भएपनी कलमले चीनाएको थियो मलाई। तर ---बिडम्बना !भाग्य चम्काउने प्रयासमा म जब अमेरिका आइपुगेँ तब मेरो जीवनको काँया पलट भो। हुनत यहाँ आउने सबैले नै त्यही भोग्छन जुन मैले भोगी रहेकी छु वा भोगेँ। यहाँ आउने सबैको नै पासा पल्टिन्छ जस्तै नेपालमा मै हुँ भन्ने,ठुलो रवाफमा बाँच्नेले पनि बिदेशमा भिजेको मुसो हुनु पर्छ त्यस्तै मलाई नेपालका साथी भाईहरुले सोध्ने गर्छन् । त्यहा के गर्दैछौ? भनेर। बिचरा!ती साथी,आफन्तहरुलाई के थाहा?यहा मान्छेको दिनचर्या,जीवनभोगाइ नै ठीक उल्टो हुन्छ भनेर।
उनिहरुको प्रश्नलाई म ठट्यौलिमा उडाउदै जवाफ दिन्छु। नेपालमा हुँदा पनि म अङ्रेजी शब्दको 'डब्ल्यु' बाट शुरु हुने 'राइटर' थिए अहिले पनि त्त्यही 'डब्ल्यु' बाट आउने शब्दकै काम गरिरहेकी छु। उनिहरु एकक्षण रणभुल्लमा पर्छन र मौन हुन्छन अनी फेरी म हठातको साथ उनिहरुको मौनतालाई भङ गर्दै जवाफ दिन्छु। ''वेटरेस्''क्या त ? 'राइटर' र 'वेटरेस' एउटै अक्षर 'डब्ल्यु ' बाट शुरु हुने शब्द होइन त ? । अनी फोनमा शब्द्को सट्टा हासोको हल्ला मात्र गुन्जिन्छ। त्यस्तै बिगत सात,आठ बर्ष अघी मात्रै मेरो एक मित्र जो नेपालमा हुँदा 'अफिसर' थियो कुनै एउटा अफिसको। ऊ अमेरिका भित्रियो। कहिले कहिले मलाई नेपालमा हुँदा फोन गर्थ्यो अनी म सोध्ने गर्थे। ''तिमी अमेरिकामा के गर्दैछौ'' भनेर ? उस्ले हाँस्दै जवाफ दिन्थ्यो नेपालमा हुँदा पनि अन्त्यमा 'सर' शब्द आउने नै थिए।अब यहाँ पनि त्यही अन्त्यमा 'सर' शब्द आउने काम नै छ। म खुशी र अचम्भित हुँदै भन्थे। ए ---त्यसो भए तिमी त 'लक्की'रहेछौ त्यहा पनि त तिम्रो स्किल र क्वालिफिकेसन अनुसारको जागिर पाएछौ राम्रो भएछ त ! अनी उस्ले हाँस्दै जवाफ दिन्थ्यो अँ ---हो नि मेरो स्किल र क्वालिफिकेसन अनुसारकै 'जब' हो अन्त्यमा 'सर' नै आउने 'डिशवासर' अन्त्यमा यस्को पनि त शब्द 'सर' नै आएन त ? अनी म तीन छक्क पर्थे।
पत्यारो लाग्दैनथ्यो किन जिस्किएको नि ? भनेर रिसाऊथे पनि। तर ---यथार्थमा त्यस्तै पनि हुदो रहेछ। आफ्नो देशमा हुँदाको सबै कुरा नै बिर्सनु पर्दो रहेछ। तर साचै भन्ने हो भने आफ्नो देशमा पलापिएर खाएकाहरुलाई भने सार्है तह लागाउने देश रहेछ यो अमेरिका। काम गर खा, नत्र भोकै बस यही सिद्दान्त छ यहाँ। वास्तवमा यो एकप्रकारले राम्रो पनि हो। मै हुँ भन्ने र भेदभाव गर्नेहरुको लागि त यो देश शत्रु नै हो।
अब अरुतिर पनि लागौ न ---नेपालमा हुँदा घरमा पानी पनि श्रीमतिले दिएको मात्र खानु पर्ने, आफुले सारेर खान सम्म नसक्ने श्रीमान हरुको पनि हालत पत्ला छ यहाँ। आँफै पका, भाडा मोल,रूचे खा, नरूचे भोकै बस किन कि नेपालमा पो जतिसुकै अभाव भएपनी श्रीमानलाई मात्र कर थियो कमाउने र श्रीमतिले काम गरेर पैसा कमाउनै पर्छ भन्ने थिएन। श्रीमती केवल भान्से अर्थात सेविका मात्र तर यहाँ त दुवैले कमाउने अवसर पनि छ र जरुरी पनि छ। यौटाले कमाएको 'डलर' ले त बिल तिर्दा नै ठीक्क ---। 'डलर' कमाएर नेपाली रु खर्च हुने भए पो श्रीमानको सेविका भएर बस्ने कि कसो ? यहाँ त श्रीमती हजम पनि हुनु पर्छ किन भने श्रीमानको कपाल पट्कै पछी काट्दा बिसडलरको हिसाब ले पैसा जान्छ।मरी मरी कमाएको पैसा नाथे कपाल काट्दा नै जान्छ भने त्यो पैसालाई सबै श्रीमान हरुले नेपालीमा 'कनभर्ट'गर्दा ठ्याक्कै लग्भग पन्द्र्हसय जान्छ अनी जिब्रो निकालेर श्रीमान हरुले ल बुढी मेरो कपाल तिमीले नै काटिदेउ जस्तै भए पनि कस्लाई पो देखाउनु छ र ?
भनेर श्रीमतीद्वारा कपाल पनि कटाउन वाध्य छन उनिहरु । यस्तै सत्य तथ्य र हास्यस्पद जीवन भोगाइ छ।हामी सबै बिदेशमा बस्नेहरुको ।
गोकुल बिबश ढकाल
डिसेम्बर ०९, ००८
झुत्रिएको ओछ्यान, फाटेको कम्मल, परदेशमा मेरो सम्पत्ती
प्वाल परेको मोजा, भिजेको जुत्ता, पसिना मेरो सारथी,
निब भाच्चिएको कलम, मिती सकिएको मलम, मेरो ओखती
चोइटिएको मन, नकमिने धन, सम्झाउ आँफैलाई कती ?
पुरानो थाल, घुन लागेको दाल, मधेसी चामल
गाई काट्ने ठाउँ को खसी, परदेशको दशी, खोइ को मलामाल ?
माड् हाल्नै पर्ने मुख, नदेखिने सुख, कुन् जुनिको यो कर्म ?
बनको भाखा, हिमालि काख, खोइ मेरो धर्म,
सारा चिज बिरानो, म आफै बिरानो, मेरै देश बिरानो
यो मेरो जुनि दुखमै बित्यो, स्रिस्टि नै बिरानो,
झुत्रिएको ओछ्यान, फाटेको कम्मल, परदेशमा मेरो सम्पत्ती !